Hambaan Masjiidaa umrii dheeraa qabu naannawa Israa’el humnaan qabatte keessatti argame - NuuralHudaa
Hambaan Masjiidaa umrii dheeraa qabu naannawa Israa’el humnaan qabatte keessatti argame
On Jul 19, 2019 1
Hambaan Masjiidaa naannawa Israa’el humnaan qabatte kan Gammoojjii Nejev jedhamu keessatti argame kun yoo xiqqaate waggaa 1200 ol dura kan ture tahuu ogeeyyonni biyyattii ibsan. Masjiidni umrii dheeraa qabu kun kan argame nannichi ijaarsaaf jecha osoo qotamaa jiru tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Hambaan masjiida argamee kun roga afreen kan ijaarame yoo tahu, qiblaan isaa qajeelatti gara Makkaa kan gara gale tahuu ogeeyyonni ibsan. Qorattoonni hambaa akka jedhanitti, Masjiidni amma argame kun dachiin Israa’el humnaan qabatte waggaa dheeraa duras, qabeenya muslimoota Falasxiin tahuu ifatti agarsiisa.
Dabalataanis, naannichatti meeshaaleen qonnaa kan argaman tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
May 19, 2022 sa;aa 7:12 pm Update tahe